Novonoina Tany India Ilay Mpampihorohoro Tao Mumbai, Nefa Hitondra Fitoniana Ve Izany? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2012 22:31 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Français, русский, Español, English
Ny 21 Novambra 2012 no novonoina i Mohammed Ajmal Amir Kasab, Pakistane mpikatroka avy amin'ny Lashkar-e-Taiba sady ilay hany mpampihorohoro tratra velona taorian'ny fanafihana tao Mumbai tamin'ny 2008. Notanterahana ilay famonoana ho faty, taorian'ny nandàvan'ny Filoha Indiana Pranab Mukherjee ny fangatahana famindram-po nataon'ilay Kasab 25 taona, hetsika iray nanamarika ny fiafaràn'ny dingam-pitsaràna efa nitatra lava be.
Lashkar-e-Taiba (LET), izay nahazo toerana mavesa-danja taorian'ilay fanafihana tao Mumbai, dia nandrahona avy hatrany fa mety mbola ho be ny fanafihana. Ireo Taliban any Pakistan koa dia nivoady ny hanafika lasibatra Indiana.
B. Raman, Indiana iray mpitàna birao fahiny, dia naneho hevitra tao anatin'ny bilaoginy momba ireo loza:
Amin'ireo olom-pirenena Indiana, avo dia avo ny fihetseham-po teo ampandrenesana ny vaovao. Toy ireo maro izay niharan'ilay zava-doza mivantana tamin'ny 2008, ilay bilaogera Matangi Mawley (izay namoy ny dadatoany nandritra ilay fanafihana) dia nanoratra hoe :
Fihetsehampo mitovy amin'izany no navoaka tao amin'ny Twitter, satria be no mahatsapa fa hoe na somary taraiky ihany aza ny fitsarana, dia mba nanao ny asany ihany raha i Kasab no asiana resaka. Ny sasany koa dia naneho ny fahafaham-pony hoe ny governemanta Indiana, izay nandany an-tapitrisa maro nihazonana an'i Kasab tany am-ponjany, dia mety tsy nitsitsy fandaniana amboniny tamin'ny volam-bahoaka. Tsikaritry ny maro ny dingana napetraka hodiavina, saingy nisy ihany koa ny fiderana ny amin'ny tokony hitazonana ny rafi-pitsaràna.
Nandita Saikia (@nsaikia): Tsy hoe nandany vola fotsiny i India ‘hitazonana an'i Kasab ho velona’; nandany vola izy tamin'ny dingana ara-dalàna sy ho fitazonana ny lalàny manokana. Tsy azo iadian-kevitra ny fandaniana.
Ashish Chowdhry (@AshishChowdhry): Nahoana aho no tokony ho faly tamin'ny nahafatesan'i Kasab? Mifaly aho rehefa…ahato ny fampianarana ankizy tsy manan-tsiny hamono amin'ny anaran'Andriamanitra…
Nisy ihany koa fisaintsaina, amin'ny maha-miaramila anaty andian-tafika azy, momba ny nandresen-dahatra mora foana an'i Kasab, raha ireo tena atidoha tao ambadik'ireo fanafihana kosa mbola mitohy miriaria any, tsy hitan'ny fitsarana.
Laughing Gas (@waatho): Ajmal Kasab dia mpisolo vaika ny ankalana fotsiny. Bitika ny fahafahampo na ny fahazoana aina rehefa fantatrao fa hoe mbola vatom-panorona iray monja no niala teo ambony latabatra.
Vishal Dadlani (@Vishal): Aza manaiky ho hadalaina sy rebirebena amin'ny fahafatesan'i Kasab. Mahalahelova satria mbola tsy ireo tena atidoha no vitantsika ny nisambotra azy. Na mifandamìna aloha isika samy isika.
Nametraka ho lohalaharana ny adihevitra momba ny fanamelohana ho faty ilay famonoana amin'ny fanantonana – fifanakalozan-dresaka tonga tsara ao anatin'ny fotoana mety, raha raisintsika fotsiny hoe tsy ela akory izay ny Fivoriamben'ny Firenena Mikambana no nandany volavolam-pandaminana iray mitodika amin'ny fanafoanana ny fanamelohana ho faty manerana izao tontolo izao. Raha firenena 110 no nifidy nankasitraka, India sy Pakistan kosa isan'ireo firenena 39 izay nifidy nitsipaka ilay volavola. Oculus Dada, mpisera anaty aterineto, dia nibitsika mikasika ilay fotoam-pifidianana :
Oculus Dada (@daddy_san): FYI (ho fampahafantarana anareo), ora 12 lasa izay, nifidy nitsipaka ny fanapahan-kevitry ny Firenena Mikambana mandràra ny fanamelohana ho faty i India. Fantatsika ankehitriny hoe nahoana. #Kasab
Bilaogera maro hafa no naneho ny fihetsehampon-dry zareo tamin'ny alàlan'ny lahatsoratra sy bitsika mikasika ilay fanamelohana ho faty. Ny sasany tsy mahita intsony izay ho vahaolana fanolo hiatrehana ny raharaha Kasab na dia tsy tena maneho hevitra momba ny fanamelohana ho faty aza. Ny hafa indray nankasitraka ny famonjàna sy ny sazy mandra-pahafaty.
Mikasika ny ho fiantraikan'ny famonoana an'i Kasab mandritra ny taona maro hifandimby, dia tsy mitovy ny hevitry ny rehetra. Ny Christian Science Monitor miteny hoe toa tsy dia hisy fiantraikany loatra eo amin'ny dingana fikatsahana fandriampahalemana eo amin'i India sy Pakistan isany, raha ny Deutsche Welle kosa milaza ny mifanohitra amin'izay. Tao anaty lahatsoratra iray nampiantranoina tao amin'ny Kafila, ilay bilaogera Indiana, Yug Mohit Chaudhry, dia niresaka ‘ny herin'ny famelàna’ ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fanantonana an'i Kasab. Mampita ireo feo farany tsy dia milaza soa loatra, hoy izy manoratra :
Ity lahatsoratra ity sy ny dikanteniny amin'ny teny Espaniola, Arabo sy Frantsay dia tohanan'ny International Security Network (ISN) ho isan'ny fiaraha-miasa hikatsahana izay hamoahana ny feon'ireo olom-pirenena tsotra mikasika ny olan'ny fifandraisana iraisam-pirenena ary ny fandriampahalemana erantany. Navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy ISN, ity lahatsoratra ity, jereo ato ny tantara mitovitovy aminy.